8 Siyaabood Oo Aad Ugu Abuuran Kartid Abuur Macaamiil | Martech Zone
Toddobaadyadan la soo dhaafay, waxaan falanqeynaynay dhammaan waxyaabaha macaamiisheenna ka kooban si loo aqoonsado waxyaabaha keenaya wacyiga ugu badan, ka-qaybgalka, iyo beddelaadda. Shirkad kasta oo rajeyneysa inay hanato waxay horseed u tahay ama ay ku kobciso ganacsigooda khadka tooska ah waa inay lahaato waxyaabo. Kalsoonida iyo maamulka oo ah labo fure go'aan kasta oo iibsasho iyo nuxur ahaanta ayaa ku kallifa go'aannadaas khadka tooska ah.
Taasi waxay tidhi, waxay u baahan tahay oo keliya inaad si dhakhso leh u eegto kanaga Analytics ka hor intaadan ogaanin in waxyaabaha intiisa badani aysan wax soo jiidanayn. Marka loo eego kharashka ku baxa dhisida goob, hagaajinta goobtaas, baaritaanka suuqaada, iyo soo saarista waxyaabahaas - waa wax laga xumaado in badanaa aan waligeed la aqrin.
Waxaan diirada saareynaa istiraatiijiyadeena macaamiisheena sanadkaan si qayb walboo ka mid ah aysan u noqon maalgashi baaxad leh. Dhowr siyaabood oo aan uga shaqeyneyno si aan ugu hagaajino waxyaabaha macaamiisheena ka kooban:
Isku darid - Sanadihii la soo dhaafay, qaar ka mid ah macaamiisheennu waxay ururiyeen maqaallo darsin ah oo dhammaantood diiradda saarey mowduuc la mid ah. Waxaan qoraalladaas u dhigeynaa maqaal dhammaystiran oo si habeysan loo abaabulay una sahlaya akhristayaasha inay dheefshiraan. Kadib waxaan u wareejineynaa dhammaan URL-yada aan la isticmaalin maqaalka oo dhameystiran oo waxaan ugu daabici doonnaa mid cusub cinwaanka ugu wanaagsan ee URL.
Socdaalka - Qaar ka mid ah macaamiisheennu waxay soo saaraan qoraallo, boodhadhyo, iyo fiidiyowyo - dhammaantood gooni. Tani waa qaali oo looma baahna. Mid ka mid ah barnaamijyada aan dhignay wuxuu leeyahay macmiilkeennu bishii hal mar si uu u duubo dhowr fayl. Markii aan duubeyno Podcasts, waxaan sidoo kale ku duubeynaa muuqaal. Kadibna waxaan u adeegsaneynaa qoraalka wareysiyadaas si aan ugu quudiyo qorayaashayada si ay u horumariyaan waxa kujira. Maaddaama waxqabadka uu kordhayo, waxaan xitaa u isticmaali karnaa sawir-qaadista iyo waraaqaha si aan ugu ballaarinno jawaabta ka dibna kor u qaadista lacag bixinta si aan u ballaarinno gaaritaankooda.
Enhancement - Qaar badan oo ka mid ah qodobbada waa kuwo si wanaagsan loo qoray laakiin waa kuwo dhacay ama aan lahayn sawirro. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan kor u qaadno qodobbadaas, waxaan sidoo kale ku daabacnaa isla URL-ka maqaallada cusub. Maxay tahay sababta loo qoro maqaal cusub oo loogu talagalay mawduuc la siiyay iyada oo la tixgelinayo dadaalkii hore loo codsaday?
Kuwani waa seddex istiraatiijiyadood oo aan u adeegsaneyno inaan ku horumarinno waxyaabaha si fiican u shaqeynaya. Saaxiibkeen, Brian Downard, wuxuu qeexay habab gaar ah oo loo abuuro nuxur u abuuraya macaamiisha boggiisa cusub ee infographic, 8 Siyaabood oo Loo Abuuro Mawduuc Abuur Macaamiil:
Abuur waxyaabo ku saabsan wacyigelinta sumadda iyo iibka - Kaliya ha ku abuurin waxyaabo ujeedada ah soo jiidashada akhristayaasha, abuur abuur waxyaabo beddelaya hoggaanka iyo iibinta sidoo kale.
Ka jawaab su'aalaha "horay u sii iibsiga" ee nuxurka leh - Abuur nuxur ku saabsan su'aalaha gaarka ah ee aad sida joogtada ah uga hesho rajooyinkaaga iyo macaamiishaada.
Abuur waxyaabo badan oo "evergreen" ah iyo ilo - Xullo mawduucyadaada si xikmad leh, markaa nuxurkaagu ma waayi doono qiimahiisa dhawr bilood ka dib markii la abuuray.
Kordhi waxyaabaha saxda ah Xayeysiinta lacagta lagu bixiyo - Ku dhiirrigeli waxyaabaha ku saabsan wacyigelinta calaamadda iyo "dib-u-habeynta" akhristayaashaas oo ay ka mid yihiin ku-beddelkaaga diiradda.
Abuur dad ka kooban jir ahaan yeelan karo - Si weyn kor ugu qaad qiimaha la dareemayo ee waxyaabahaaga adoo gelinaya PDF la soo dejisan karo.
Samee "farqiga aqoonta" ee dadku rabaan inay buuxiyaan - Mawduucaagu waa inuu bixiyaa qiime intaad weli ka tegeyso "cliffhanger" oo dadka ka dhigaysa inay rabaan inay wax badan ogaadaan
Cusboonaysii qaabkaaga ciyaar leh sawiro xirfad leh - Inteena ugu badan ma nihin nashqadeeyayaal waaweyn. Taabadalkeed, u hel oo u soo iibso sawirro horay loo sameeyay iyo sawirro muuqaal ah waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Ku dar xoog leh, caqli badan ugu yeer ficil - Weligaa ha uga tagin akhristayaashaada inay sudhan yihiin, sii tallaabo cad oo ay qaadaan si ay u qaadaan tallaabada xigta.
Dabcan, haddii aad u baahan tahay gargaar - hubi inaad mid ka mid ah iska hubiso Fasallada weyn ee Brian ama waad kireysan kartaa wakaaladayada macluumaadka!
Tags: Brian Downardwac talaaboabuurkafikradaha ka koobanContent Suuqdhiirrigelinta waxyaabahaabuuro macaamiilctaMacaamiishadesigncanbahawalxaha waligood dhagaha ahmuuqaallo kalexayeysiinta la bixiyayhoray u iibsashadanashqadeynta xirfadeedgo'aanka iibsigawaxyaabaha iibka ah